कोराेना विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली देशहरु एक भएको सन्देश – सार्क प्रधानमन्त्रीहरुको भिडियो कन्फ्रेन्स – Online National Network
कोराेना विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली देशहरु एक भएको सन्देश – सार्क प्रधानमन्त्रीहरुको भिडियो कन्फ्रेन्स
२ चैत्र २०७६, आईतवार १५:४७
काठमाडौं–विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड—१९ (कोराेना) सँग लड्न दक्षिण एसियाली देशहरु एक भएको सन्देश दिएका छन् । आइतबार दक्षिण एसियाली देशहरुको संगठन (सार्क)का प्रधानमन्त्रीहरुले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्दै महामारी विरुद्ध एकजुट भएर लड्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
७ देशका सरकार प्रमुख सहभागी भिडियो कन्फ्रेन्समा सबै प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो देशमा भइरहेको तयारीको जानकारी गराएका थिए । पाकिस्तानबाट भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले बैठकमा भाग लिएका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म १ केस मात्र प्रमाणित भएको र आगामी दिनमा यस विरुद्ध लड्न जनशक्ति र अस्पतालहरु तयारीमा राखेको जानकारी गराएका थिए ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले १९ वटा केस कन्फर्म भएको र कोरोना विरुद्ध लड्न सबै शक्ति लागेको बताएकी थिइन् । श्रीलंकाका रास्ट्रपति गोटावाया राजपाक्षेले विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द गर्नेसम्मका कार्य गरेको बताए । मालदिभ्सका राष्ट्रपति इव्राहिम मोहमद शोलीले कठिन अवस्थामा पनि आफूहरुले काम गरिरहेको र अहिलेसम्म यो भाइरसबाट कसैको मृत्यु नभएको बताएका थिए ।
फगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले सार्कले कोरोनासँग भिड्न एउटा ठोस योजना बनाएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङले अहिलेसम्म एउटा विदेशीमा यो भाइरस संक्रमण देखिएको बताए । उनले यो भाइरस विरुद्ध लड्न केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारसँगै काम गरिरहेको बताए ।
उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु पठाएर खोजपड्तालको काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे । पाकिस्तानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. जाफिर मिर्जाले कोरोना नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा नै काम भइरहेको बताए । उनले नियन्त्रणका सबै विकल्पहरुमा काम गरिरहेको तताए ।
सार्कका अधिकांश नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमाहरु तत्कालका लागि बन्द गरेको बताएका थिए । भारतले सार्क देशहरूले कोभिडसँग लड्न इमर्जेन्सी कोष समेत बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा भारतले १ करोड अमेरिकी डलर तत्काल जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त कोषको नाम कोभिड-१९ इमर्जेन्सी फण्ड भनिएको छ ।